Guddiyada Baarlamaanka oo ka hadlaya qaabka loo wajahayo doorashada 2016 – STAR FM SOMALIA
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar ayaa sheegay in Guddiyada joogtada Baarlamaanka ay isla eegi doonaan qaabka ay u dhici doonta doorashada iyo qorshayaasha la qabanayo ka hor doorashada.
Mr Jeylaani ayaa sidoo kale xusay in qodobadii ka soo baxay shirkii Madasha wadatashiga Qaran inay qeyb ka yahay waxyaabaha ay ka hadli doonaan Guddiyada Baarlamaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa dalbaday in la horkeeno go’aanada ka soo baxay shirarkii Madasha wadatashiga qaran ee looga hadlayay qaabka doorashooyinka u dhici doonaan, iyadoo aan la ogeyn sida xilligan wax uga bedeli karaan go’aano ay isku raaceen Madaxda dowladda dhexe iyo kuwa Gobolada oo iyaga ah kuwo ay xilligan ka go’do talada Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furitaankii kalfadhiga 8aad ka sheegay in Baarlamaanka la horkeeni doono go’aanada ka soo baxay shirka Madasha wadatashiga ee la isku raacay habka doorashada 2016 u dhaceyso.
Baarlamaanka Federaalka oo waqtigiisa sii dhamaanaya ayaa awood badan ku laheyn go’aanada Hogaamiyeyaasha Madasha wadatashiga qaran, iyadoo ay muuqata in go’aanadu ay inta badan yihiin kuwo gaar u ah hogaamiyeyaasha.